कपिराइट बहस : बसन्त थापा अदालत गए के हुन्छ ? • Anumodan National Daily
काठमाडौं । रवि ओड प्रकरणले नेपाली संगीतमा कपिराइटको बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको अनाधिकृत प्रयोगलाई जनमानसमा त्यति गम्भीर रुपमा लिइदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्ने हो भने यो निकै गम्भीर इस्यू मानिन्छ । कपिराइटको मुद्दामा करोडौं मात्र होइन, अरबौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेका दृष्टान्तहरु विश्वमा धेरै छन् ।
नेपालकै कुरा गर्दा, केही महिना अगाडि मात्रै निर्देशक शम्भु प्रधानले आफ्नो पुरानो फिल्म ‘सम्झना’ गीतलाई बिनाअनुमति प्रयोग गरिएको भन्दै फिल्म ‘कृ’ का निर्मातालाई प्रहरीमा तानेका थिए । प्रहरीले ‘कृ’का निर्माता सुवास गिरीलाई एक रात हिरासतमासमेत राख्यो । तर, मुद्दा दर्ता अगावै दुईपक्षबीच सम्झौता भयो । शम्भुले सुवास गिरीसँग ११ लाख ठटाए ।
अहिले त नेपालको कानूनमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा गीत बजाउँदासमेत कपिराइट लाग्ने व्यवस्था छ । यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा गीत-संगीत प्रयोग गरेका सार्वजनिक यातायातले तोकिएको रोयल्टी तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपालमा कपिराइटको विषय पटक-पटक उठ्ने गर्छन् । तर, अदालतसम्म कमै पुग्छन् । प्रायः मिडियावाजीमै सिमित हुन्छन् भने कतिपय आपसी सहमतिमा सल्टिन्छन् । कपिराइटको विषयमा जनचेतनाकै अभाव रहेकाले स्रष्टाहरु अन्यायमा पर्ने गरेको बताउँछन् प्रतिलिपी अधिकार विज्ञ रामप्रसाद भट्टराई ।
प्रतिलिपी अधिकार कार्यालयका रजिस्टारसमेत रहिसकेका भट्टराईले रवि ओडको केसमा बसन्त थापाले क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालत जान सक्ने बताए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्रष्टाको अनुमतिबिना स्टेजमा गीत गाएर रवि ओडले प्रतिलिपी अधिकार ऐनको उल्लंघन गरेका छन् । यदि बसन्त अदालत गए भने रवि ओड र नेपाल आइडलले लाखौं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
मानिसहरुले प्रतिलिपी अधिकारको विषय राम्रोसँग नबुझेकाले उल्टै बसन्त थापाप्रति गलत टिप्पणीहरु गरिरहेको बताए । ‘उहाँमाथि गरिएका टिप्पणीहरु हेर्दा पनि नेपालमा प्रतिलिपी अधिकारको विषयमा अझै चेतना अभाव छ भन्ने महसुस भयो ,’ उनले भने ।
भट्टराईको भनाइअनुसार एउटाले सिर्जना गरेको गीत अरु कसैले व्यवसायिक प्रयोजनले गाउन पाउँदैन । गाउने नै हो भने सम्बन्धित स्रष्टासँग लिखित अनुमति लिएको हुनुपर्छ ।
ऐनअनुसार पहिलोपटकको अपराधमा १० हजारदेखि १ लाख जरिवाना वा ६ महिना कैद हुन सक्छ । दोस्रोपटक अपराध दोहोरिएमा २० हजारदेखि २ लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ
‘बिहेमा, पिकनिकमा गाएजसरी स्टेजमा गाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा एउटाले दुख गरेर गीत सिर्जना गर्ने र त्यसबाट अर्कोले पैसा कमाउने स्थिति बन्छ । तर, यदि स्रष्टासँग लिखित अनुमति नै लिएको छ भने चाहीँ गाउन सकिन्छ । स्रष्टाले उक्त गीत गाएर प्राप्त हुने आम्दानीको केही हिस्सा आफूले पाउने शर्तमा वा केही पनि नपाउने शर्तमा पनि गाउने अनुमति दिन सक्छन् ।’
त्यसो त पुराना गीतहरुका रचनाकार/संगीतकार धेरै आज जिवित छैनन् । उनीहरुको गीत गाउँदा कोसँग अनुमति लिने त ?
भट्टराईको भनाइ अनुसार स्रस्टाको मृत्यु भएको खण्डमा प्रतिलिपि अधिकार उसको पारिवारिक सदस्यमा सर्छ ।
‘यदि स्रष्टाले अरु कसैसँग सम्झौता गरेर कपिराइट हस्तान्तरण गरेको छैन भने अरु सम्पत्तिको हक जस्तै यो हक पनि निजको श्रीमती/श्रीमान वा छोरामा हस्तान्तरण हुन्छ,’ उनले भने ।
गीतको वास्तविक स्रष्टा को ?
कुनै पनि गीत रेकर्डिङमा मुल रुपमा चार पक्ष संलग्न हुन्छन् । गायक-गायिका, संगीतकार, रचनाकार र रेकर्डिङ कम्पनी । उनीहरुमध्ये कोसँग गीतको कपिराइट हुन्छ त ? स्रष्टा को हो त ?
प्रतिलिपी अधिकार ऐनमा लेखिएको छ, ‘प्रतिलिपि अधिकार धनी भन्नाले कुनै रचनाको रचयितामा आर्थिक अधिकार निहित रहेको भए त्यस्तो रचयिता, रचयिताबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामा मूलरुपमा आर्थिक अधिकार निहित रहेको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था र आर्थिक अधिकारको स्वामित्व कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको भए त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था सम्झिनुपर्छ ।’
यस दफाले आर्थिक अधिकार र प्रतिलिपि अधिकार अन्तरसम्वन्धित हुने देखाउँछ । पूर्वरजिस्टार भट्टराई भने कुनै पनि सांगीतिक सिर्जनाको कपिराइट मुलरुपमा रचयिता अर्थात् गीतकारसँग हुने बताउँछन् । ‘गीतका शब्द जसले रचेको हो, सो गीत उसैको बौद्धिक सम्पत्ति हो । किनकी शब्दबिना गीत बन्दैन,’ उनी भन्छन् ।
यद्यपि, गीतकारले निश्चित पैसा लिएर निश्चित समयका लागि आफ्नो गीतको कपिराइट बेच्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनको दफा २४ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिलिपि अधिकार धनीले आफूलाई प्राप्त आर्थिक अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार लिखितरुपमा सम्झौता गरी अरुलाई हस्तान्तरण गर्न वा कुनै शर्त तोकि वा नतोकि प्रयोग गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।’
सालको पातका गीतकार नवराज पन्त हुन् । उनी अमेरिकामा बस्छन् । अमेरिकाबाटै उनले आफ्नो सिर्जना बसन्त थापालाई बेचेका थिए । बसन्तको आफ्नै स्टुडियो अभ्यास डिजिटल्समा गीत रेकर्ड भएको हो ।
कुलेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु माझीलाई पारिश्रमिक दिएर बसन्तले गाउन लगाएका हुन् । यसको म्युजिक भिडियोमा पनि थापाकै लगानी रहेको छ । यस हिसाबले गीतको आर्थिक अधिकार बसन्तमा निहित छ । उनले यो गीत यूट्यूवमा आफ्नो व्यक्तिगत च्यानलबाट अपलोड गरेका छन् ।यूट्यूवबाट भएको आम्दानी उनले प्राप्त गर्छन् । गीत अहिलेसम्म २ करोड ८० लाख पटक हेरिसकिएको छ । यस हिसाबले यूट्यूवबाट बसन्तले ५-६ लाख आम्दानी गरेका छन् ।
के भन्छन् गीतकार ?
रवी ओड प्रकरणमा गीतकार पन्तले पनि आफ्नो गीतका शब्दहरु तोडमोड गरिएको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकाबाट फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘रवि ओडलाई मैले हिजैबाट सपोर्ट गरेको छु र भोली पनि गर्छु । तर, आफ्नो सिर्जना बलात्कार गरेको हेर्न सक्दिनँ । उनले त्यहँँ गाएको शब्द ‘लालीको फूल गर्ने रिस’ कहीँ लेखेको छु र मैले ? जे भनेनी जे गाएनी हुनी भए बसन्त दाइको संगीत काफी छ, मन लागेको शब्द हाल्नुस ।’
पन्त अगाडि लेख्छन्, ‘बसन्त थापाको मेलोडी नेपालको कुनै गायकले साधना नगरी गाउनै सक्दैन, जो रवि एउटा उदाहरण हुन् । हामीलाई गाली गर्नुपूर्व मैले सालको पात लेख्दा परदेशमा बसेर गरेको दुःख अनि बसन्त थापाको सयौं दिनको मिहिनेत, कुलेन्द्र दाइको लगनशीलता विष्णु दिदीको निरन्तरता साना दुःखले भएको होला र ? शब्दबिना संगीत र संगीत बिना गीत बन्दैन । त्यही शब्द बिगारेर गाउँदा मेरो पसिनामाथिको तिरस्कार त म कसरी सहनु ?’
पन्तले गीतको कपिराइटको मुद्दा भने उठाएका छैनन् । उनले केवल बिगारेर गाएकोमा चित्त दुखाएका छन् ।
बसन्त अदालत गएमा ?
ऐनअनुसार प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त गर्न कुनै पनि रचना दर्ता गराउनुपर्ने अनिवार्यता हुँदैन । यदि कपिराइटमा मुद्दा परेमा अदालतले दण्ड जरिवाना गराउन सक्छ । ऐनअनुसार पहिलोपटकको अपराधमा १० हजारदेखि १ लाख जरिवाना वा ६ महिना कैद हुन सक्छ । दोस्रोपटक अपराध दोहोरिएमा २० हजारदेखि २ लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ ।
यसैगरी अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि भराउँछ । क्षतिपूर्ति मूल्यांकनका लागि उसले प्राविधिक टिमको सहयोग लिने व्यवस्था छ । प्राविधिक टिमले गीतको लागत र आम्दानीमा पुगेको असरलाई हेरेर क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्छ ।
नेपाल आइडलको टिमले बिनाअनुमति व्यवसायिक रुपमा अरुको गीत गाइरहेको हुनाले यसमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन आकर्षित हुने स्पष्ट देखिएको छ । यदि मुद्दा परेमा गायक-गायिकाले नभएर नेपाल आइडलले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, किनकी कन्सर्टहरुबाट भएको आम्दानी उसले आफूसँग राख्ने गरेको छ । जेल जानुपर्ने भएमा पनि नेपाल आइडलकै जिम्मेवार व्यक्तिहरु जानेछन् ।
बसन्त थापा भने अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिको मुद्दा हाल्ने निर्णयमा पुगेका छैनन् । लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले नै यसमा अग्रसरता लेओस भन्ने उनले चाहेको देखिन्छ । थापाले भनेका छन्, ‘मलाई धेरैले मुद्दा दायर गर्न सुझाव सल्लाह दिइरहनु भएको छ । तर, मैले यस विषयमा तत्काल केही सोचेको छैन ।’
व्यवसायिक बाहेक अन्य प्रयोजनमा अरुका रचना प्रयोग गर्दा प्रतिलिपि अधिकार ऐन आकर्षित हुँदैन । उदाहरणका लागि टिकटक, रियालिटी शोहरुमा, बिहे, पार्टी, पिकनिकहरुमा गीत गाउन, सुन्न पाइन्छ ।
यूट्यूवमा कभर भिडियो बनाएर पोष्ट गर्दा चाहिँ ऐन आकर्षित हुन सक्छ । किनकी यूट्यूव एउटा कमर्सियल प्लेटर्फम हो, जहाँ भ्यूजका आधारमा पैसा आउँछ ।
गायक-गायिका देशविदेश, स्रष्टा ओझेलमा
सालको पातको यूट्यूब भ्यूजबाट बसन्तले ५-६ लाख कमाए पनि यो गीतको ठूलो आर्थिक लाभ भने गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माले उठाएका छन् । देशभित्र मेला महोत्सव र विदेशका कन्सर्टमा उनको चर्को डिमान्ड छ । गीतकी गायिका विष्णु माझी बाहिर स्टेजमा गाउँदिनन् । त्यसैले कुलेन्द्रले अन्य गायिकाहरुको साथ लिएर स्टेजमा यो गीत गाउँछन् ।
कुलेन्द्रले अन्य गायिकाहरुसँग सालको पात गाएर देश विदेशका कन्सर्टबाट गर्ने आम्दानीको हिस्सा बसन्तसम्म भने आइपुग्दैन । के यसमा चाहिँ कपिराइटको कुरा आउँदैन ?
बसन्त भन्छन्, ‘यसमा कुलेन्द्रजी र मेरो आपसी समझदारी छ । यसलाई अहिले म बाहिर ल्याउन चाहन्न ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘नेपालमा कुनै पनि गीतलाई स्टेजमा गाउँदा त्यसको रोयल्टी संगीतकार/गीतकारले पाउने प्रचलन नै भएन । यसले गायक-गायिका र गीतका सर्जकहरुबीच ठूलो अन्तरालको स्थिति बनेको छ ।’